Muuna Miiggane: Q2aad (Sheeko taxana ah)
By Ibrahim Aden Shire October 30, 2018
Cabdiyo Miigagne, maalintii la kufsaday hadda waxaa ka soo wareegtay 12 bilood. Mudadaas waxay u dhaxaysay isbitaalo, qaar dalka gudihiisa ah iyo dibada. Cabdiyo maalintii askarta Kenyan-ka ah kufsadeen 16 sano jir bay ahayd. Waxay ahayd gabadh si wacan loo soo koriyey, xannaano aabe iyo naxariis hooyo ayay ku soo barbaartay. Quruxda waxay ka raacday hooyadeed Saxarla Guure, waa joog dhexaad itaal dumar oo wacan Rabbi ku mannastay, si kale wax kuma garatide waa qalanjo qurux la soo ka caysa. Waa gabadh han weyn, isuma quudho meelaha hoose, ragga xod-xoda doonka ah ama faduuliya qaarbeyna salaanta ka qaadin. Nin ay maalin xantiisa ama xumaan laga sheegayo maqashay jubudhu uma tiraahdo, uma furto umana xidho, waa sabaabtaamidda dhalinyaro badan u la colloobeen uguna si feeyaan mid qab iyo islaweyni dilay. Waxay ku riyootaa iyadoo halyey guursaday, gaaf wacanna loo tumay oohooyo noqotay, iyadooubad inta dihatay misana daadahaysay, aqal daahya weyn ka soo toostay.
Sowtan ma aha Cabdiyo, is…
Dowladdu Ma ku Ceebaysantahay inay Baraha Bulshada ka Shidaal qaadato
By Ibrahim Aden Shire October 29, 2018
In badan waxay kooxaha mucaaradka ku ah dowladda hadda jirta iyo madaxda maamul goboleeyadu dowladda ku eedeeyeen inay xoogga saartay baraha bulshada. Taageerayaasha badan ee dowladdu ku leedahay baraha bulshada ayaa lagu tilmaamay kuwo lagu bixiyay lacag badan. Waxaa eedaha lagu daray in shacabki Soomaaliyeedba ay kasoo qaadday inta ooga sacab tunto Faysbuugga. Haddaba eeddaasu ma saxbaa dowladduse ma ku saxantahay inay ku tiirsanaato baraha bulshada si ay u ogaato rabitaanka shacabka?
Waxaa qabaa inay sax tahay arrintaas. Bulsho walba oo dal ku nool waxay ka koobantahay saddex un. Koox siyaasadda ku jirta ama talo ha hayso ama mucaarad ha noqoto. Koox ree balad ah oo ku xiran idaacadaha lana socoto waxa dalka ka socdo sidaas darteedna wixii soo kordha wax ka yiraahda iyagoo isticmaalayo kannaalo kala duwan sida wargaysyada iyo baraha bulshada. Kooxda seddexaad waa dadka meesha uu u badan yahay. Waa shacab weynaha aan waxba ka ogayn waxa socda. Waxaa dhici karto ianysanba kala jecla…
Tacliin sare Dumarka Dan ma ugu jirtaa?
By Ibrahim Aden Shire October 25, 2018
Inta la ogyahay waayihii hore, gabdhuhu waa ku qatanaayeen goobaha waxbarashada. Gaalo iyo islaan dhammaan dhaqammadi jiray waxay ka sinnaayeen in wiilasha la hormariyo marki la joogo waxbarshada. Hab dhaqankaas si guud waa isu baddalay. Dadaal dheer iyo dagaal xooggan ayaa loo galay in dhaqankaas wax laga baddalo. Si weyn ayaa loogu guulaystay. Waddamada horumaray tirada gabdhaha ee waxbarato ayaa ka badan midda wiilasha. Marki la gaaro heer jaamacadeed farqigu wuu sii kordhaa. Tusaale, dalka Ingriiska 27.3% wiilasha dugsiga sare ka baxay ayaa jaamacad ka aaday sanadki hore (2017) halka midda gabdhuhu ay ahayd 37.1%. Tira ahaan 30,000 ayay gabdhuhu dheer yihiin tirada wiilasha jaamacad galay sanadkaas. Maraykanka gabdhaha haysto shahaado heer kolej ah ee da'doodu u dhaxayso 22-29 waxay gaarayaan 5.5 milyan halka wiilasha la midka ah ay yihiin 4.1 milyan. Dunida inteeda kale waa un sidaas ama si u dhow.
Waxbarshada gabdhaha waxay ka mid tahay halbeegyada lagu cabbiro horumarka,…